Ezigbo ụlọ ahịa ọ dị mma maka ịgba igwe ugwu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Hardtail igwe kwụ otu ebe - azịza bara uru
Hardtail igwe kwụ otu ebe - azịza bara uru
Ezigbo ụlọ ahịa ọ dị mma maka ịgba igwe ugwu?
karịa na-egosipụtakarị na ọnụahịa zuru ezu yiri nke ahụ ọnụanyịnya igwe. Mostly na-agakarị ịnyịnya ụzọ dị larịị: Ọ bụrụ na ị na-etinye oge ka ukwuu n'ime oge gị n'okporo ụzọ dị larịị, mgbe ahụhardtail igwe kwụ otu ebenwere ike na-enye gị a ngwa ngwa na fun na-agba ịnyịnya nke ga-sook elu agafeghị oke bumps ya n'ihu nkwusioru ndụdụ.Nwere ike 16, 2018
Nabata ndị mara mma. Taa bụ ụbọchị ajụjụ. Anyị niile maara na igwe egwuregwu enduro nwere ike ịme ụdị ọzụzụ niile, site na ndagwurugwu, enduro, XE, jumps ndị nwụrụ anwụ, nnukwu jumps na ogige igwe kwụ otu ebe na ugwu freeride, ọ dịka ọ bụ igwe kwụ otu ebe.
Ma tupu ịmalite nrọ banyere ọmarịcha enduro a mara mma, nke mara mma, ọ dịtụla mgbe ị chere banyere ya? Nke a bụ ihe siri ike, ụfọdụ n'ime ndị na-ekiri gị nwere ike ịnwe otu n'ime ebe ndọba ụgbọala gị, nke a bụ naanị igwe kwụ otu ebe ị nwere. Mana anyị na - enweta ọtụtụ ajụjụ n’okpuru ma na soshal midia anyị dịka: Igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịwụli ụkwụ 20? Bikegbọ ịnyịnya ígwè a enwere ike ịgba ọsọ? Enduro? Ọ nwere ike ime XC? Ọ nwere ike ịme Usoro Freeride? Ọfọn, taa bụ otu n'ime ụbọchị ndị m ga-enyocha ihe niile anụ ọhịa a nwere ike, ya mere, ka anyị pụọ! (Upbeat music) Ha ha! Ọfọn, nke a bụ ihe ọhụrụ m na-egosi Scout Comp na nke a bụ ihe ike ike. Nke ahụ pụtara na isi nkuku dị oke slack, enwere 140ml nke njem na-aga n'ihu, etiti ahụ siri ike, nwee nkedo dị ala, ma ị nwere ike ịtụgharị ihe ọ bụla na igwe kwụ otu ebe a ma bulie ya.
Ma ọ na-amakụ mmụọ gị nke njem ma ọ bụ tụọ niile otu ụzọ ụkwụ n'oké ọhịa, ka mpaghara gị mgbapụta track, gị na mpaghara unyi jumps, ọbụna na-anọ cross, downhill ma ọ bụ enduro agbụrụ, ihe a na-wuru ya. Odi nma, ka anyi rida ahia nihi na anyi kwesiri ima ihe ihe a puru ime. Enwere m ihe ole na ole m chọrọ ịtụba ya iji nwalee ya.
Abịara m ụlọ ọrụ zuru oke iji gosipụta ihe a niile ma ọ bụ nke ahụ bụ Chickands Bike Park na Bedfordshire na UK. Ọ na-enyekwa ọtụtụ ọzụzụ dị iche iche site na Single Track Loop, na Cross Anọ, na Dirt Jumping, na Dual Slalom, na Mini Downhill, na Freeride stof. Ya mere, kpuchie niile ọzụzụ, M ga-ahụ ma ọ bụrụ na ihe a nwere ike were dum bike ogige na ala, ka anyị! Haha! Ọ dị mma agbụrụ iri anọ, ho ho ho ho.
Speedgba ọsọ, mwakpo, ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ịmaghị ihe Four Cross bụ, ọ bụ isi ọ bụ ndị na-agba ịnyịnya anọ na-agba ọsọ megide ibe ha na egwu nke dị na mkpọda, ọ na-agbada, mana enwere ọtụtụ nmali, enwere ọtụtụ akụkụ, enwere nnukwu oghere, enwere mgbochi dị iche iche ị ga-agagharị na ndị ọkwọ ụgbọala atọ ndị ọzọ. Ya mere, aga m na obodo larịị, aga m aga ụkwụ na ụkwụ, a ga m ahụ ma igwe kwụ otu ebe a ọ ga - ejide ya, ọ bụrụ na ọ nwere njide, ka anyị mee. (egwu dị egwu) Oh wow.
Obe ahu bu ihe omumu nke mbebebeghi kemgbe. Ihe niile gbasara ịrụ ọrụ yana iweta arụmọrụ ahụ. Chere.
Ọ dị mma, enwetara m ume m ma ana m ekwu okwu banyere itinye ike gị n'azụ ụkwụ iji nweta ọsọ n'ihi na ịchọrọ nnukwu ọsọ Nnukwu jumps dị ka okpukpu atọ ebe ahụ na okpukpu abụọ na otu okpukpu abụọ n'akụkụ ahụ, ịchọrọ Ma mgbe ị nwere nkwusi zuru ezu, dịka a ga - asị na m na - agba Scott Genius na egwu a, aga m agbachi na nkwụsị azụ ahụ iji nweta ike dị ike ịme ndị ahụ jumps m nwetara 35hp na ya, m weliri ntakịrị, mana achọghị m ka taya ahụ gbanwee ka ọ gbanwee n'ihi na achọrọ m ị nweta ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee iji merie ndị ahụ. Ma igwe kwụ otu ebe a bara uru ịgba ọsọ, ịnwere ike ịnya ihe a na ngwụsị izu wee banye n'ụlọ dịka m kwuru ma ọ bụ mee njem enduro na Sọnde ma ọ bụ Mọnde.
Chei, ka anyị banye na nsogbu ọzọ. Ọ dị mma maka ịchọta onwe gị na ogige igwe kwụ otu ebe, ebe enwere obere okpokoro okpokoro, dị ka nsị unyi, ha na-ebuwanye ibu. Kedu nke na-abanye n'ime okpukpu abụọ nke na-ebuwanye ibu ma na-arị elu, ma ka na-eto eto.
Ajụjụ wee bụrụ, enwere ike ịwụli elu? O doro anya na enweghị m ike ịwụ elu, mana enwere m ike ịme aghụghọ? Ọfọn, lee ụzọ aghụghọ ole na ole iji mee ya. (Ìhè dị egwu) Ha ha! Chei! Naanị m gosiri gị na ọ nwere ike ime ya, mana enwere ụfọdụ ihe ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme ihe ike, dịka Groove Scout ọhụrụ m, ụkwụ ụkwụ 26 nke Dirt -Jumpbikes, azụ azụ ya siri ike, ihu nkwusioru na-esiwanye ike. N'ihi na m na-agba ịnyịnya mara mma stiif nkwusioru na ihu, nke a, 140 ml njem, m unyi awụlikwa elu igwe kwụ otu ebe, 110 ml njem.
Ma ha dị nro na nke a, n'ihi ya ị ga-ahụ njedebe ihu na-adanye na iwepụ ma ọ dị gị ka ibu ahụ gị niile ọ na-agbanwe n'aka ekpe, nke abụghị mmetụta dị mma. Ya mere, nke a bụ ihe ị ga-elebara anya mgbe ị na-anya egbugbere ọnụ dị larịị dị ka nke a, ihu ntụgharị ihu dị ezigbo mma dịka m kwuru, ọ na-eme ihe ike, ọ na-enweta ogologo oge. The n'azụ ọgwụgwụ ga-adị ogologo mgbe na unyi-agba ịnyịnya ígwè ọ ga-abụ nnọọ obere na kọmpat, steeper isi n'akuku.
tricep gbalaga mgbatị
Super ìhè. Na ikwu eziokwu, ị na-agba ịnyịnya 27.5.
Na m ka m na-anyafe oke, nke ahụ bụ 2.6. Ya mere nrụgide taya m pere ezigbo mpe, ọ na-adị ka ọ dị umengwụ na nmali, akpọghị m ya akpọchi n'ihi na achọghị m nkwusioru mgbe m na-awụli elu ole na ole.
N'ihi ya, m chọrọ ka n'ihu nkwusioru na-arụ ọrụ. Mgbapu ahihia na-agba ọsọ ga-agba ọsọ nke ọma, 80 psi, 65 psi dabere na taya ị nwere. N'ebe a, enwetara m 30 psi na baron ndị a.
Chaị, ọ dị mma, ị ga-esi n'ụlọ ịnyịnya ibu n'oké ọhịa gafere, gbagoo ụzọ ole na ole, na-aga n'okporo ụzọ ahụ, dobe akwa gị, mee aghụghọ ole na ole, dọpụta. Ka anyị banye n’ihe ịma aka ọzọ. Ọ dị mma, ajụjụ na-esote, enwere m ike ime enduro freeride downhill, n'ezie ọ nwere ike! Ana m agwa gị anya anọ, lelee nke a! Odi nma, aga m etinye Downhill, Enduro na Freeride n’otu uzo.
N'ihi na ha niile nwere otu akụkụ. Mana kedu ihe ị ga - ahụta, site na iji ike oge niile, ebumnuche maka XE bụ na ọkpọkọ ọkpọ gị ga - adị elu karịa, BB gị ga - adị elu karịa, oche ụkwụ gị ga - adị obere, na isi gị ga - adị elu karịa nke a - gburugburu hardtail. Ma ọ bụrụ na ị tinye ụdị ihe ndị a n'ime igwe XE mgbe niile, ọ ga-esiri gị ike ịgbanwe ahụ gị na nrịgo ahụ.
ụgwọ niile rad
Karịsịa ma a bịa n'akụkụ ebe kpọdara akpọrọ ebe ịchọrọ ịhapụ ibu ahụ gị laa azụ ma dabere azụ ka ọ ghara ịdị gị ka ị na-agagharị na njikwa ahụ. The XE igwe kwụ otu ebe, n'aka nke ọzọ, bụ ihe banyere ịrị elu karịa ịgbadata, na-agba ịnyịnya ihe siri ike na hardtail, nke ọma, na-eme ihe n'eziokwu, ọ ga-abụ njem siri ike, mana ọ ga-abụ njem na-akpali akpali, nke ahụ bụ n'ezie. Mgbe m na-agba otu ngalaba na ihe enduro m hụrụ n'okpuru echegbula banyere akara, M ga-emefu m 150ml njem tetara niile nke bumps.
N'ihe banyere azụ siri ike, ana m elekwasị anya karịa. M ga-arụ ọrụ m site na nkebi nke a wee chọta usoro zuru oke, dị larịị ka ị gafere site na-enweghị taya taya na-adọta m na nkwụsịtụ. Ọ bụ ezie na azụ ahụ siri ike enweghị nkwusioru.
Ya mere, ị ga-eji ahụ gị maka nkwusioru ka ị ghara ịchọ ịnọdụ ala ma zuru ike ma gafere n'okporo ụzọ ahụ n'ihi na ahụ gị ga-arụ ọrụ siri ike iji kpoo ihe niile ahụ. Ma mgbe ị na-eme nke a, ịchọrọ ịhapụ ikpere gị. Wantchọrọ ijide ikpere gị, na-agbago igwe kwụ otu ebe na mgbe niile n'okpuru gị naanị iji mee ka ọ na-aga.
Ahh kedu maka obe? Enweghị nsogbu, ha, na-aza onwe ya. (Upbeat music) Ha, ha, ha! Site n'okporo ụzọ gaa n'okike nke okike, ee, enyi m, nke ahụ bụ mba gafere. Nyochaa ọtụtụ okporo ụzọ mba na-enweghị ngwụcha, yana obere mbọ ma ịdị nfe na obere mbọ gafee mba ahụ wee laghachite na ịkwọ ụgbọ elu dị ọcha.
You'll ga-ahụ onwe gị na XE agbụrụ na ngwụsị izu na n'ụzọ ị ga-esi rụọ ọrụ n'ime izu. Wepụta oge na sadulu a. Maka m, ihe isi ike ahụ adịgidela n'ime obi m ruo mgbe ebighi ebi n'ihi na ọrụ m wuru na ọdụ siri ike.
Yabụ, enwere m nnukwu ịhụnanya maka ọkpa ike siri ike. You nwere ike ghara ezu nke ya, super mfe. Onweghị ihe nwere ike ịgahie, ọmarịcha mpempe akwụkwọ na azụ.
Aga m agbago ịnyịnya karịa. Ha ha wow enweghi otutu nkpa siri ike nke kwesiri ntukwasi obi. Nwere ike ịtụba ihe ọ bụla na ya, ọ ga-etinye oke egwu egwu ụwa n'ihu ya ma gbalịa gbadata ya n'ihi na ị ga-agbaso ya mgba, nke ahụ bụ n'ezie.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ihe siri ike, chọpụta ihe ị na-agba ịnyịnya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ọtụtụ mba gafere, okporo ụzọ ndị ruru unyi, ụzọ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye nwere ọtụtụ ịrị elu karịa, wee lee igwe kwụ otu ebe na-agafe agafe, n’ihi na nke ahụ ga-abara gị ọtụtụ uru karịa ebe mgbago, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe niile- okirikiri igwe kwụ otu ebe, site na obere mgbada, Freeride, Enduro, agbụrụ XE, unyi awụlikwa elu, agbụrụ na azụ nke anọ, ihe ọ bụla, nke ọma, hardtail ike ike na-eme ya niile n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nakwa n'ụzọ dị mfe, n'ihi na ịnweghị ọkụkụ na-agagharị na azụ maka nkwusioru.
Ọ dị oke mfe, obere nsogbu na ịlaghachi na igwe kwụ otu ebe. Echere na ị masịrị ya. Isiokwu a na-enye gị ntakịrị nghọta banyere ohere na njedebe nke oke ọkpa.
Ọ ga-amasị m ịkwanye ihe a karịa. Achọrọ m ịma ya aka. Achọrọ m ịhụ ike m nwere ike ịnagide na hardtail, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ pịa ebe a n'okpuru nka anyị nwere ike ịme na mgbapụta mgbapụta, mgbe ahụ ebe a, hardtail vs fatbike on a pump pump Pịa ụwa ma ọ bụrụ na ịnweghị ụtụ n'ihi na ị na-atụfu ụfọdụ ọdịnaya dị ukwuu.
Ma leekwa gị ọzọ o ọma!
Kedu ihe onye na-emepụta ihe ga-enweta site na ọkachamara
Kedu ihe eji eme igwe eji agba ugwu?
Hardtail anyịnya igwemee ka ndị na-agba ịnyịnya nwee mmetụta nke inwekwu njikọ na ụzọ ahụ. Ihe mmeghachi omume na nzaghachi sitere naigwe kwụ otu ebekwe ka ndị na-agba ịnyịnya gbapụta site na mbara igwe na-agba ọsọ na arụmọrụ kachasị. Ọtụtụ na-arụ ụka na ha na-emekwa ka onye na-agba ịnyịnya ka mma.Ọnwa Iri 29, 2020
Ọ bara uru ịzụta ụlọ ahịa?
Ihe siri ikebụ vasatail
Maka ndị mbido,hardtailsnwere ike ime ka oké ngagharị. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ma ọ bụ ego maka ihe karịrị otu igwe kwụ otu ebe, ahardtailna-eme ka pedaling na korota a otutu mfe karịa a zuru nkwusioru igwe kwụ otu ebe. Naanị tinye obere ikuku ikuku na taya gị ma ị ga-aga.Eprel 20, 2020
Ya mere, anyị maara na ịgba ịnyịnya ugwu na-atọ ụtọ - ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a n'ọhịa - na ị nwere ike ịrụ ụka ụbọchị niile banyere igwe kacha mma - ee, yabụ echere m, enwere m ezigbo igwe kwụ otu ebe. - Eeh, mana ịchọrọ ihe niile na-egbu maramara ka ị nwee ọtụtụ egwuregwu? - Ee e, nihi na echere m na ichoro nkpuru ahihia ka inwe ike gharii dika o kwere mee - Bịanụ, ka anyị gaa maka ikpere ma hụ onye nwere ihu ọchị kachasị na njedebe - nke ahụ dị mma, dịkwa mma. You nwere isi dị na azụ nke uche gị? - Ee - Ee? Nice.- Enwere m ọchị karịa gị.- Nah! (mumbles) Anyị na-agbago ebe ahụ? - Ee, ọ na-atọ ụtọ n’ebe ahụ. (Joy Music) - Ọ dị mma, nke a bụ ngwa ọgụ m ịhọrọ taa iji mee ka m na-amụmụ ọnụ ọchị ruo ọtụtụ kilomita.
M ga-eji ụzọ Neilout na-ebelata ụzọ ndị a niile na Scotland, nke a bụ Nukeproof Scout Comp 27.5 tinyere igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ ihe ike ike ma na-efu 6 1,699.
Chọghị ihe ọ bụla dị ka Neil - nke ahụ bụ Scott Genius 700 Tuned. Nke a bụ igwe kwụ otu ebe zuru ezu. Carbon eriri nile, otu mpempe akwụkwọ na azuokokoosisi, nkwusioru ikuku, o nwere ihe niile.
Ma ọ na-abịa na a adịchaghị price. Ọ na-efu £ 6,999. Ọ bụ nnukwu ego mana akpọrọ m onwe m imebi.
Ọ na-atọ m ụtọ ịgba ịnyịnya igwe n'elu ugwu ụbọchị ndị a. (egwu egwu) (teknụzụ) - Ọ bụ ezie na ụzọ ndị ahụ dị n'ụdị dị ịtụnanya, echere m na enwere m nsogbu mgbe niile anaghị enwe ọchị na igwe kwụ otu ebe. - Ọ dị mma.- Ọ dị ezigbo mma, mana m furu efu n'azụ gị mgbe ị batara n'okporo ụzọ.- Ee.- will ga-ahụkwu njide.
Enwere m nsogbu na nke ahụ - Ọfọn, m na-agba ịnyịnya ọsọ ọsọ dịka m nwere ike ọtụtụ oge, ọ bụghị oge niile, mana igwe kwụ otu a nwere ike bụrụ nke zuru oke maka ụzọ a. Yabụ na ọ bụ 29er, 150 mil njem. Enweghị ike ịka mma. - Gbalịa soro ọsọ gị na-eme nke a.
Enwere m ihe siri ike, agbasiri m taya m ike n'ihi na ọ mara ezigbo mma ma enweghị m ike ijide ya. Mana ọ na-abanye na mmewere ya mgbe ụzọ ahụ ji nwayọ nwayọ na obere warara, na unyi bụ obere grippy. - Ebee ka hardtails dị ukwuu n’ezie? Dị ka unyi na-awụlikwa elu, ọ na - adị njọ mgbe niile - ee, n'okporo ụzọ ebe ọ na - amị amị ma ị pere aka ma na - agbapụta, ị ga - enweta ọsọ ọsọ karịa karịa nke gị n'ike zuru oke - na n'elu anyị kwurịtara na gbagoo dị ka a ga - asị na ị na - aga njem na - eburu ogige gị va n, tinye igwe kwụ otu ebe na ụgbọ - Oof. - Ma ị gara ebe dị jụụ mana ịchọrọ ịnya, ịnyịnya mmiri bụ ezigbo nhọrọ maka nke ahụ. - Aga m aga 100% na ya.
Ọ bụ ihe kachasị mma, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, ọ dị mfe. Ọtụtụ obere ihe na-aga n’ihu, ebe nkwusioru, ị nwere ọhịa nwere ike ịga, ị maara? - Emebiri m, ahụrụ m igwe kwụ otu ebe n’anya. Okpokoro ọnụ.
Echekwala m na m mehiere, ọ bụ nnukwu ego maka igwe kwụ otu ebe, mana ọ masịrị m ịnweta nke kachasị mma na nke kachasị arụ ọrụ --- nke ọma, ọ dị mma. My hardtail na-amasị m. Ọ dị iche.
Ma m na-eme, ị maara --- ọ bụ ihe niile - ọ bụ ihe niile, nri. (Ekwado egwu funk) oh ekwensu m - nke ahụ siri ike, (moans) ọansụ, ọ bụghị Blake? - nke ọma, Ahụghị m ya ọchị, Neil. Mba, o siri ike, anọ m, ebe niile.
Emere m osisi. - Ọ mara oke mma. - Eeh.
Anọ m na njedebe. (Neil na-achị ọchị) Anọ m na njedebe. - Abụ m ngwa ngwa. -Yes, ị gaghị enwe ike ịnọ n'ahịrị ma ọ bụrụ na ị bụ, (egwu na-atọ ụtọ) - yabụ Blake, anyị na-agba ụzọ ụkwụ dị jụụ. - Oh, anyị gbara ụfọdụ The Epic ụzọ ụkwụ ool ọkụ ụzọ na-akwụsị site na ikpeazụ nzọ ụkwụ.
Oh, nke ahụ dị ntakịrị, ọ tụrụ ụjọ. - Ya mere, anyị nọ na Fort William. E nwere ụfọdụ ụzọ dị ịtụnanya sitere n'okike.
Are jọgburu onwe ya. - Mm - nọkwasịrị na abụọ nke anyị kacha sie ike downhillers, - Ee - na m nwere na-chuckle n'ime onwe m a obere. (Blake na-achị ọchị) Karịsịa mgbe m na-eso gị, ụfọdụ n'ime akụkụ ndị a nwere ike ịbụ ndị kpuru ìsì.
ihe mara abụba dị mma
M chụpụrụ ha tupu, n'ezie.- Ee, M - Ma ị bido, mana nke ahụ apụtaghị na ihe siri ike enweghị ike ijikwa ya.- Ọfọn, ha nwere ike, nri? - Ha na-echetara m nke dịka Land Rover.
Na-eme ihe niile. Thingsfọdụ ihe adịchaghị mma dịka igwe kwụ otu ebe zuru oke - nke ahụ bụ ezigbo ihe atụ, ọ masịrị m - mana ị nweghị ike ikwu na otu na-atọ ụtọ karịa nke ọzọ - mba, enwere m ọtụtụ ọ funụ. Anọ m na njedebe, mgbe niile n'ihu gị, gbalịrị ịchụ gị n'ihi na ị na-agbatị ngwa ngwa, ị nwere 29 nkwụsịtụ. - Ma nke ahụ nwere ike ịtọ ụtọ - Ee, nihi na adị m ntakịrị ọsọ ọsọ wee họrọ ahịrị dị iche iche - Ma anyị maara na ọtụtụ ndị na-ekiri anyị hụrụ ihe siri ike n’anya.
Anyị na-enweta ya na nkwupụta oge niile, nke ahụ dị mma, anaghị m akpọ ya asị ma ọlị, m ka hụrụ ya n'anya mana enwere m ike ịgba ịnyịnya ígwè m zuru ezu karịa. M nwere a n'ezie oyi XC hardtail carbon bike. Anyị hụrụ a igwe kwụ otu ebe - Anyị na-ekwu banyere anyịnya igwe m hụrụ a n'ezie dị mma otu.
Adị m ka oh wow.- Na nzọ ụkwụ anyị gbabara na enyi nwere carbon hardtail na taya akpụkpọ ụkwụ.- Ọ nwere post dropper.- Ezigbo mma.- Oh, ọ mara mma mara mma, enwere m ezigbo anyaụfụ.- Ọbụna nwatakịrị nwanyị nọ n'ụlọ mmanya n'abalị ụnyaahụ - anyị nwere - nwere ụzọ njem njem njem dị egwu.
Igwe igwe kwụ ọtọ, ụdị ihe ahụ, n'ezie.- Ee, ahụrụ m ya n'anya. Ahụrụ m ihe siri ike n'anya.
Ọ na-atọ ụtọ. Ọ dị iche. M na-enweta nzọ ụkwụ dị ntakịrị karịa ka m chere. - Anyị ga-eme ntuli aka, echere m. - Oh, ezigbo echiche.- Enwere m mmasị ịmara ihe ndị na-ekiri anyị na-agba ịnyịnya, yabụ pịa ebe ahụ, ka m mara nkwenye zuru oke ma ọ bụ sie ike. Dị ka ịgbanye ụdị igwe kwụ otu ebe a .- Ee dabere na ọ bụ fullsus ma ọ bụ hardtail, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọmarịcha edemede ọzọ ebe m na-agbanye igwe kwụ otu ebe a rue oke ya, pịa ebe a n'okpuru. - Nye anyị isi mkpịsị aka wee pịa bọtịnụ sub.
Gịnị kpatara Hardtails ji dị mma?
Ọ ga - eme ka ọ dị nro - Ọ bụrụ n ’ịmụghị etu esi efe igwe kwụ otu ebe n’elu mgbọrọgwụ na okwute, ahardtailga-agbagha gị n'okporo ụzọ ahụ ma ọ bụ mebie ezé gị. Ọzọkwa, n'ihi enweghị nkwụsị azụ, bunnyhops dị ngwa ngwa, ọ dị mfe iburu wheel ihu, na igwe kwụ otu ebe na-adịkarị mfe na nimbler.
Ihe siri ike MTB nwụrụ?
Ihe siri ikeAdịghịNwụrụ Anwụna 8 Ihe Mere I Kwesịrị Iji Gbaa Otu. Ugwu igwe bidoro na mkpọda ugwu. Agbanyeghị na igwe kwụ otu ebe na - akwụsịkarị na mpaghara XC World Cup,hardtailA ka nwere ike ịhụ igwe kwụ otu ebe dị ka ngwa ọgụ kachasị ahọrọ na egwu ndị na-adịchaghị na teknụzụ.Ọnwa Ise 21, 2019
Nwere ike ịwụ elu ụgbọ mmiri?
Ihe siri ikedị mma makajuli elu.Ị nwere ikeagbam ume na ụzọ elu.Ha'na-enwe mmetụta nke ọma na mgbanwe mgbegịala, n'agbanyeghị. Enwere ihe kpatara na unyiima eluna ule anyịnya igwe na-hardtailsna igwe kwụ otu ebe AM na DH bụ (ọtụtụ) na-akwụsịtụ zuru ezu.Eprel 25, 2011
Ego ole ka ikwesiri iji gbazite ugwu igwe?
Na nke kacha nta,anyịkwadoro ile anyahardtailsmaka ihe na-erughị $ 1,500 nankwusioru zuru ezuna $ 2,000 na $ 2,500.Gịnwere ike ịzụtaanyịnya igwemaka obere, karịsịa ma ọ bụrụgịpụọ na ụdị aha ma ọ bụ dị njikere iwere akụkụ dị ala.Eprel 18, 2016
Ọ bụ hardtail kaara ndị mbido mma?
N'ihi nke a,hardtailanyịnya igwe dị mma makandị mbidondi choro imefu egoỌzọoge ịgba ígwè na obere oge na ndozi na ndozi. Ofdị igwe kwụ otu ebe a dịkwa ọnụ ala karịa ka ọ nweghị ujo n’azụ na pivots. Yabụ, ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị zụrụ igwe kwụ otu ebe, ịzụta ahardtailigwe kwụ otu ebe bụezibido.
Ndị Hardtails dị mma maka ndị mbido?
Ọ bụ ntinye-ọkwa zuru ezuonye mbidoigwe kwụ otu ebe na-enye ọtụtụ nnwere onwe iji nweta nkasi obi, ọ dịkwa mfe ịmeghe ọnụ ụzọ nye ọtụtụ ndị igwe ugwu.IkeUgbo ala ugwu abughi maka onye obula, karisia ma oburu na ichoro ntuli gi na ala ndi ozo.
XC Hardtails nwụrụ anwụ?
Ihe siri ikeAdịghịNwụrụ Anwụna 8 Ihe Mere I Kwesịrị Iji Gbaa Otu. Ugwu igwe bidoro na mkpọda ugwu. N'agbanyeghị na zuru nkwusioru anyịnya igwe na-aghọwanye ndị ọzọ nkịtị naXCWorld Cup circuit,hardtailA ka nwere ike ịhụ igwe kwụ otu ebe dị ka ngwa ọgụ kachasị ahọrọ na egwu ndị na-adịchaghị na teknụzụ.Ọnwa Ise 21, 2019
Kedu ihe igwe eji agba ugwu na-emere gị?
Ihe siri ike bu igwe di ocha. Ha ga-ejikọ gị n'okporo ụzọ ahụ wee mee ka ị banye n'okporo ụzọ ahụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Ha dị mma maka ịgafe obodo na ụzọ ịgba ọsọ. OLEE OT DO YOU SI EWU? Achọrọ ịhọrọ?
Enwere igwe kwụ ọtọ ugwu ọhụrụ ọ bụla na-apụta?
Odi ka ndi di ume ala n’obi gha n’enwe ntaneti, nke nwere ugba obe nke obodo, ime ala, uzo ozo nke nwere ike iweputa osisi maka 2021. Uru ya doro anya.
Kedu nke ka mma igwe eji agba ịnyịnya ma ọ bụ etiti?
Mkpa ọkụ, dị mfe karị, na-adịchaghị ọnụ, na-adịgide adịgide karị, ma bụrụkwa onye a pụrụ ịtụkwasị obi karịa etiti nwere nkwụsị azụ, ihe siri ike bụ ọrụ nke ụwa igwe kwụ otu ebe. Hụ ihe kachasị amasị anyị n'okpuru, ma ọ bụ pịgharịa miri maka nyocha miri emi nke igwe kwụ otu ebe a na nhọrọ ndị ọzọ dị oke, yana ndụmọdụ ịzụrụ na ndụmọdụ bara uru.